आत्माहत्याको मुख्य कारण निराशा हो, निराशामाथि कसरी विजयी हुने ? — Motivatenews.Com
आत्माहत्याको मुख्य कारण निराशा हो, निराशामाथि कसरी विजयी हुने ?
काठमाडौं – ठेस लागेर लड्नु ठुलो अपराध होईन, लडेपछि नउठ्नु सबैभन्दा ठुलो अपराध हो । सफलतामा बदल्न नसकिने विश्वमा त्यस्तो कुनै असफलता छैन । महान पुरुषहरुले असफलतालाई सफलताको सिँँढि सम्झेका थिए ।
आफैदेखि निराश भएकालाई कसले आशामा बाँध्ला ? न्युयोर्क नगरमा प्रतिबर्ष करिब ८६० अर्थात प्रतिदिन दुईभन्दा बढी व्यक्तिले आत्महत्या गर्छन् । आत्महत्याको प्रयत्न गर्ने यस्ता २३५ व्यक्तिलाई बेलवि अस्पतालले बचाएको छ । संसारका अन्य ठुला नगरहरुमा आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या न्युयोर्कमा बढी छ । अमेरिकामा प्रत्येक बर्ष पन्ध्र सयभन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको अनुमान छ । सम्पुर्ण सभ्य संसारमा प्रतिबर्ष १ लाख भन्दा बढी व्यक्तिले आत्महत्या गछर्न । कस्तो दुःखको कुरा छ, विश्वमा प्रत्येक एक मिनेटमा आत्महत्या हुन्छ ।
साधारण मनुष्यका लागि पनि जीवन यति महत्वपुर्ण छ कि जेलको कोठामा बसेका अपराधि पनि फँसि भन्दा पहिले जीवनको बचेको अमुल्य क्षणलाई गनिरहन्छन्, त्यसैले यी आत्महत्याको कारण के हुन् ? आखिर किन यति धेरै मानिस आफ्नै हातले आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्छन ? यसको एउटै कारण भनेको तिनीहरु जीवनबाट निराश हुनु हो । आत्महत्याको मनोवैज्ञानिक बिश्लेषण त अहिले गरिएको छैन, तर दश मध्य नौ को कारण निराशा नै हुुने गर्छ । केहि बर्षअघि न्युयोर्कमा एक युवा संगितकारले घोर निराशामा आत्महत्या गरे । उनी यति गरिब थिए कि उनले आफ्नो अमुल्य भ्वायलिनसमेत बन्धकी राख्नुप¥यो । आफ्नो प्यारो भ्वायलिन फर्काउन पाउने कुनै आशा नदेखेर जीवनमा अत्यन्तै निराश हुन पुगेका उनले अन्ततः आफ्नै जीवन समाप्त गरे ।
यस्तो संघर्षपुर्ण क्षण प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा आउँछ । तिनको सामना गर्ने हाम्रो साहस तथा ईश्वर–विश्वासमाथि निर्भर हुन्छ । उत्तरी फ्रान्सको युद्धमा लडेका एक अंग्रेज अधिकारिले आफ्नो अनुभव यसरि बताए –‘साँचो वीरता शस्त्रयुद्ध जित्नुमा होईन जीवनको संघर्ष जित्नुमा छ ।’ जीवन संघर्षमय छ । सबै प्रकारका निराशासँग सामना गर्दै ईश्वरमा विश्वास राख्दै साहसका साथ अडिक भई खडा रहने व्यक्ति नै सच्चा योद्धा हो । थुपै्र प्रतिभावान युवा कलाकार आलोचकहरुको कटु आलोचनाबाट निराशा भएर कलाको उपसना नै छोडिदिन्छन् । ती निराश कलाकारहरुले जीवन सफलताको लक्ष्यमा पुग्न अन्तरआत्माले भनेको मार्गमा दृढ विश्वास राखेर हिँड्नुपर्छ भन्ने सोच्दैनन् । ओलबुल अमेरिकामा आउँदा आलोचकहरुले उनले त्यहाँ आफ्नो धाक जमाउन नसक्ने बताए । किनभने उनमा संगीत–विधाको पुर्ण ज्ञान थिएन र उनलेभन्दा राम्रो भ्वायलिन बजाउने एक कलाकार त्यहाँ थिए । तर ती कलाकारमा कला–प्रतिभा भएपनि ओलबुलको जस्तो आत्मानुभुति थिएन । र, आज उनलाई अमेरिकामा कसैले चिन्दैनन्, जबकि ओलबुल अमेरिकिहरुको हृदयमा अमर भएका छन् ।
निराशा मानवको सबैभन्दा ठुलो शत्रु र ईश्वरको अभिषाप हो । मनुष्यको ईश्वरिय शक्तिहरु नाश हुनाको सबैभन्दा ठुलो कारण यहि हो । यस घातक रोगको विषबाट प्रायशः सबै ग्रस्त छन् । यसले मनुष्यको तन र मन दुबैलाई आक्रमण गर्दछ । यस्तो बेला यदि तपाईसँग अदम्य आत्मविश्वास नभएको भए तपाई पथभ्रष्ट हुनुहुन्थ्यो ।
निराश प्रायः आफ्नो मनबाट आउने गर्छ । निर्धनता र अपराधका लागि सबैभन्दा बढी यहि जिम्मेवार छ । निर्धन विचारले नै निर्धनता ल्याउँछ । शंका र भय भरिएको मनले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन । निराशावादि मनुष्यका शक्तिहरु कमजोर हुन पुग्छन् । मानसिक शक्तिहरुका नेता ‘साहस’ हार्न पुग्छ तथा निर्णयशक्ति समाप्त हुन पुग्छ । तर्कशक्ति र उत्साह मन्द हुन जानाले उसले कुनैपनि विषयमा ठिक विचार गर्न सक्दैन । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने सम्पुर्ण मानसिक जगतमा अराजकता फैलिन पुग्छ । साहस नेता नबनेसम्म मनका शक्तिहरुले काम गर्न सक्दैनन् । विजय आफुभन्दा केहि दुरि पर हँदा थप्रै व्यक्तिले यस्तो क्षणमा हिम्मत हार्न पुग्छन् । थुप्रै चोटि सफलताको आकाशवाणि वा पत्र पुग्नुअघि निराश व्यक्तिले आत्महत्या गरिसकेका हुन्छन् । हामी दैनिक अखबारहरुमा यस्ता थुप्रै व्यक्तिका समाचार पढ्न पाउँछौं । व्यापारमा असफलता, सम्पत्ति वा मित्रको अभाव, घरकलह वा प्रेममा असफलताजस्ता आत्महत्याका अनेक कारणलाई एउटै नामले पुकार्न सकिन्छ, त्यो हो निराशा वा निरुत्साह । । आखिर यति धेरै आत्महत्या किन हुन्छ ? वास्तवमा रोगी मस्तिष्क नै यसको कारण हो । निराशा मनको रोग हो । यो क्यान्सर वा कुनै पनि त्यस्तो रोगभन्दा कम छैन, बरु निराशा तिनीहरुमध्ये सबैभन्दा भयंकर छ, किनभने यसैको कारण मनुष्य मनको सन्तुलन गुमाएर अपराध गर्छन् र आप्mनो जीवन नष्ट गर्न पुग्छन्
एक डाँका कैदीको यस पत्र कसरि निराशाले केहि व्यक्तिलाई सत्यको बाटोबाट टाढा लिएर जान्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ –निराश र संयमहिन बनेपछि हामीले आफ्नो जीवनमा खराब कामको निर्णय गर्दछौं उक्त भयानक समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि त्यतिबेला हामीले जे गर्न पनि तयार हुन्छौं । मानसिक निश्चेष्टताले हामीलाइ कायर बनाईदिन्छ । ’ विश्वयुद्धको बेला एक व्यापारिले निराश भएर व्यापार बन्द गर्ने निश्चय गरे ।
एक दिन उनी कुनै पार्कमा यहि चिन्तामा डुबेर बसेका थिए । त्यसै बेला एक मगन्ते आएर उनको छेउमा बसे । रक्सीले मात्तिएका ती मगन्ते लड्नै लागेका थिए । व्यापारिले उनीसँग उनको दुरवस्थाको कारण सोधे । मगन्तेले प्रश्नकर्ता स्वएम् निराशाको शिकार भएको महसुस ग¥यो । त्यसैले उसले पनि कष्टको कारण सोध्यो । व्यापारिले जवाफ दिए, ‘मेरो व्यापार नष्ट भयो । अब सोचिरहेछु के गरुँ ?’ मगन्तेले उनका आँखामा हेर्दै भने, ‘के तपाइलाई मेरो तुलनामा आफु कति धेरै धनवान छु भन्ने थाहा छैन ? तपाईसँग यौवन, स्वास्थ्य र शक्ति छ । तपाईका शक्तिहरुलाई निराशाले ढाकेको छ तपाईलाई जीवनको सम्पुर्ण कुरा प्राप्त छ । जीवनको मुल्यलाई बुझ्नुहोस् निराशालाई छोड्नुहोस् । यहि निराशाले मलाई बर्बाद ग¥यो । म एक पढे–लेखेको युवक हुँ । केहि बर्षअघि तपाईलेजस्तै व्यापारमा असफल भएपछि मैले हिम्मत हारे र सोचें सायद रक्सीले मेरा शक्तिहरुलाई पुनः जगाईदिनेछ । मैले रक्सी पिउन थालें । केहि समयसम्म मभित्र पुनः उत्साह सञ्चार भएको जस्तो लाग्यो । तर त्यसको सँगसँगै मेरो पिउने बानी बढ्र्दै गयो । बारम्बार प्रयत्न गर्दा पनि मैले रक्सी छोड्न सकिन । परिणमस्वरुप जीवनका सबै शक्तिहरु निभ्न थाले र हेनुहोस्, आज म निराश छु, हतास छु, र मेरो कुनै भविष्य छैन । तपाईको जीवन तपाईको कुरा तौलिरहेछ । ठेस लागेर लड्नु ठुलो अपराध होईन, लडेपछि नउठ्नु सबैभन्दा ठुलो अपराध हो । सफलतामा बदल्न नसकिने विश्वमा त्यस्तो कुनै असफलता छैन । महान् पुरुषहरुले असफलतालाई सफलताको सिँढी सम्झेका थिए । उठ्नुहोस् र याद राख्नुहोस्, असफलता लड्नुमा होईन, बरु हरेक पटक लडेर नउठ्नुमा छ
ती मगन्तेको मुखबाट यस्ता प्रेरणादायी शब्द सुनेपछि निकै प्रभावित भएका व्यापारिले मनमनै सोच्न थाले, ‘यदि यी वर्वाद व्यक्तिले पनि जीवनलाई यति आशाले हेर्न सक्छन् भने अवश्य पनि मेरा लागि अझै आशा बाँकी छ ।’ त्यसपछि ती व्यापारि एउटा नयाँ आशा र उत्साह लिएर पार्कबाट फर्के । आज उनी अत्यन्तै धनवान पुरुष भएका छन् । उनी भन्छन् –‘मेरो सफलताको सबैभन्दा ठुलो श्रेय ती मगन्तेलाई जान्छ । मैले आफ्नो सबै चिज निराशाको बलिवेदीमा होम गरिसकेको बेला उनले मलाई उत्साह दिएका थिए ।
निराशामाथि विजयी भाग २ : साहस मनको सम्राट हो, मनलाई कसरी चलाउने ?
अरु यस्तै यस्तै उत्प्रेरणात्मक कथाहरु पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।